Google Pixel sales abụghị ihe Google tụrụ anya | Gam akporosis
Ihe Pixel Google bu otu uzo nke igwe nke bu ihe di iche na gam akporo. Emere ọgbọ nke atọ nke ndị a na ọdịda ikpeazụ wee rụọ ọrụ na ahịa karịa mgbe ọ bụla. Ejiri ekwentị dị iche iche arụ ọrụ dị iche iche Gịnị ka ha nwere. Google egosighi data erere na ngwaọrụ ndị a. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ anaghị enwe afọ ojuju.
Na ngosipụta nke nsonaazụ ya maka nkeji nke mbụ, ụlọ ọrụ ahụ ahapụla anyị data nke nnukwu mmasị. Ebe ọ bụ na ha kwuru na ndị a Google Pixel anaghị ere dị ka ụlọ ọrụ ga-achọ. Ozi nke doro anya na-anọchite anya nkwupụta dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke ahụ na-eme ka o doo anya na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụkwa mgbasa ozi na-abịa mgbe ọ na-efu efu otu izu maka ihe a na-akpọ Pixels dị ọnụ ala, na-atụ anya ịbụ onye isi na May 7. Modelsdị ọhụrụ ndị a, ndị nkọwa ya nọ na-eri eri izu ndị a, na-anọchite anya ntinye nke ụlọ ọrụ na ngalaba nke etiti etiti na gam akporo. N'adịghị ka ekwentị ndị dị ugbu a, nke niile dị elu.
Google kwadoro ya na ahia nke ato nke Google Pixel dị ala na nkeji iri na ise nke afọ a, ma e jiri ya tụnyere ahịa nke afọ gara aga. Ọ bụ ezie na, dị ka ọ dị na mbụ na nke ha, ha enyebeghị ụfọdụ data ahịa. Companylọ ọrụ ahụ ahapụbeghị anyị data ahịa gbasara ekwentị ha. Ma na ha ghọtara na ire ahịa na-aka njọ karịa ka ha tụrụ anya ya bụ ihe dị mkpa.
Otu n'ime ihe ndị enyerela maka ịre ahịa na-adịghị mma nke Google Pixel 3 ndị a bụ nrụgide na njedebe dị elu na gam akporo. Buru n’uche na Ahịa ama ama ama na-achịkwa akara ise dị elu, na atọ n'ime ha nwere oke kachasị: Apple, Samsung na Huawei. Ya mere, maka ika dị ka Google ọ dịghị mfe ịnweta niche na mpaghara ahịa a na ekwentị ha. Nke a bụ ihe na-emesị gosipụta n'ahịa ọjọọ ndị a.
Otu n'ime nsogbu ụlọ ọrụ na-eche ihu, bụ nsogbu nke ire Google Pixels ndị a dị ka smartphones kacha elu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha ga-asọmpi na ụdị dị ka iPhone, Samsung Galaxy S10 ma ọ bụ Huawei P30 nso. Ọ dị ka mgbe ihe atụ ndị a anaghị abụcha otu. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ụdị na gam akporo ndị ụdị ha dị elu nwere ike karịa ekwentị Google ma nwee ọnụ ala, dịka OnePlus ma ọ bụ Xiaomi.
Ya mere, ọCompanylọ ọrụ a ga-anwale ọdịmma ya n'etiti etiti. Ebe ọ bụ na n’ime otu izu a ga-eweta Pixel 3a na Pixel 3a XL. Ha na-anọchite anya ntinye nke ụlọ ọrụ America na mpaghara ahịa ọhụrụ, nke ha na-atụ anya inwe nsonaazụ dị mma karịa ndị a na-achọta ugbu a n'ahịa dị elu. Agbanyeghị na ahịa adịghị mma na njedebe ya dị elu, ụlọ ọrụ ahụ egosila nkwa ya iji gaa n'ihu ịmalite ekwentị. Ya mere, anyị ka nwere ike ịtụ anya ọgbọ ọhụrụ nke Google Pixel. Ma ọ dịkarịa ala, nke a bụ ihe ha kwuru ugbu a.
Ọ ga-abụrịrị ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka Google Pixels ndị a si dabere maka ọdịnihu. Inghụ ihe isi ike ha nwere na oke njedebe a, anyị amaghị ma Google ọ ga-ewebata mgbanwe dị mkpa na ọkwa ya maka afọ a. Kemgbe oge mgbụsị akwụkwọ anyị kwesịrị inwe ụdị ọhụrụ. Kwa afọ ha na-ahapụrụ anyị ọnụ ọgụgụ n’ọnwa Ọktọba. Ọ dịkwa mkpa ịhụ etu ekwentị gị ga-esi rụọ ọrụ.. Ezigbo ahịa ga-agba ụlọ ọrụ ahụ ume ka ịmalite ekwentị ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Ya mere, anyị ga-ege ntị na atụmatụ ụlọ ọrụ na ọnwa ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Google Pixels anaghị ere dị ka atụrụ anya
Xiaomi Mi MIX 3 5G ka emeputara ulo oru na Europe